प्रदेश १ : कांग्रेस सभापतिमा ३ जनाको भिडन्त, कसले मार्लान् बाजी ?
विराटनगर | मंसिर १६, २०७८
नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को सभापतिमा तीन जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
संस्थापन पक्षका तर्फबाट नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहका झापाका नेता उद्धव थापाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । थापा कांग्रेस झापाको दुई कार्यकाल सभापति बनेका थिए ।
बुधवार भएको मोरङको अधिवेशनमा पनि सिटौला पक्षले संस्थापन पक्षलाई सघाएको थियो । डा. शेखर कोइरालाप्रति लक्षित गरेर उनीहरुले मोर्चाबन्दी गरे पनि सफल हुन भने सकेका थिएनन् ।
सिटौला समूहबाटै अध्यक्ष पदमा संखुवासभाका तारामान गुरुङको पनि चर्चा रहेको छ भने देउवा पक्षबाट अमृत अर्याल प्रदेश सभापतिको दौडमा रहेका छन् ।
संस्थापन इतर पक्षबाट गुरूराज घिमिरे र राजीव कोइरालाले प्रदेश सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् ।
प्रदेश अधिवेशन आजबाट हुँदैछ ।
प्रचार समितिका संयोजक राजीव कोइरालाले अनुसार विराटनगर अस्पताल नजिकैको खुला मैदानमा बिहीवार २ बजे अधिवेशनको उद्घाटन हुने छ ।
यस्तै मनोनयन दर्ता बिहीवार मोरङ पार्टी कार्यालयमा गरिने छ ।
प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्न विराटनगर अस्पताल छेउको मैदानमा शनिबार बिहान ८ बजेदेखि मतदान गरिने उनले बताएका छन् ।
चुनावमा एक हजार ७ सय प्रदेश प्रतिनिधिहरूले मत खसाल्ने छन् ।
उद्घाटन सत्रमा २ हजार कार्यकर्ता उतार्ने कांग्रेसले जनाएको छ । प्रदेश अधिवेशनमा १ करोड भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान कांग्रेसले गरेको छ ।